Best 24 Leg Atụmatụ Echiche Ide maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kacha mma 24 Leg Design Idea maka nwoke na nwanyi
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akụkụ ụfọdụ nke ahụ gị, ịkwesịrị iwepụ ụgwọ dị mma maka nke ahụ. A tụlere ihe niile, ọ ga-adakwasị gị ruo mgbe ebighị ebi! Nke a bụ ihe mere ị kwesịrị iji nwee egbu egbu mara mma.
1. Atụmatụ mara mma mara mma
Ọchịchọ dị mma #leg tattoo bụ ihe ndị mmadụ na-eji eme ihe dị egwu. Nke a bụ ihe mere egbu egbu a ji dị egwu.
3. Ụda nta ụkwụ dị mfe
Ọrụ nke inking bụ ihe yiri nke ọ bụla na nchịkwa ndị ọzọ ị nwere ike ịrịọ mgbe niile.
4. Ụkwụ ụkwụ ụkwụ Chic
N'ihe dị mma maka nchịkwa, ihe ka ukwuu bụ ebubo ahụ.
5. Ụdị akpụ ụkwụ
N'oge na-adịghị anya, ị ga-aghọta na ọ bụghị uru ịkwụsị abụọ ma ọ bụ atọ dollar maka ịmecha #tattoos na mkpirikpi mara.
6. Ụkwụ egbu egbu
Ahụ gị ga-akacha mma kachasị mma, ma ozugbo ịchọtara echiche nke ego a chọrọ maka egbu egbu kachasị elu, ị nwere ike ịnweta ohere iji chekwaa ego, na n'ime oge ahụ ịmepụta ndokwa ka mma na ndepụta nke egbu egbu gị.
7. Na-egbu egbu egbu
Ị nwere ike ijide n'aka na onye ọ bụla na-egbu egbu egbu ga-akwụ gị ụgwọ dị ka ikike ha si dị, oge achọrọ maka ịrụ ọrụ na ngwá ọrụ achọrọ maka ime otu ihe ahụ.
8. Egbu egbugbu mara mma
Ọ gaghị agbanye ụlọ ahịa igbu egbu abụọ ma ọ bụ atọ ịmara ụgwọ, dị ka onye omenkà ga-achọ izute gị tupu ị kwụọ ụgwọ ọnụ maka ọrụ ahụ.
9. Atụmatụ akara igbu egbugbere ọnụ
Nleta na ụlọ ahịa ahụ bara uru karị, ebe ị nwere ike iji nlezianya chee banyere ọrụ ahụ, ị ​​ga-enwetakwa echiche zuru oke banyere ụgwọ ahụ, na-ahapụ gị ka ị gbanwee mgbanwe ọ bụla na atụmatụ igbu egbu ị nwere ike ịnọ na-eche banyere inwe.
10. Ụdị egbu egbu ụkwụ
Ndị a bụ ihe ndị dị mkpa maka ịkọwa ọnụ ahịa niile nke ịkọ: Ụfọdụ ebe na-emekarị nsogbu, na-akpali onye nkà ahụ ka ọ kwụọ ụgwọ ya.
11. Ogbugbu mara mma
Na-agbakwụnye na-akwụ ụgwọ, ọ bụghị ọnụ dị oke ọnụ.
12. Ụkwụ igbu mmụọ
Atụmatụ bụ echiche kachasị mkpa na ego ị ga-akwụ ụgwọ. Ọnụ ọgụgụ buru ibu buru ibu, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu.
13. Ụkwụ akpụ ụkwụ
Mgbe ịchọrọ ka onye omenkà mee ihe pụrụ iche maka gị, ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ karịa ma ọ bụrụ na ị họtara ihe ndepụta.
14. Ọkara ụkwụ ụkwụ
Mgbe ị na-esi n'aka onye omenkà kwupụta ihe, ị nwere ike ịrịọ nhazi nkwenye, chọpụta ndị ọkachamara ma ọ bụ gbanwee ihe ndị ị chọrọ tupu dịka atụmatụ ego gị.
15. Ụdị egbu egbu
Ị nwere ike ịtụle ịgbanwe mpaghara nke egbugbere ọnụ gị, ma ọ bụ na-agbaghasị ụzọ ya dị iche iche n'echeghị echiche zuru ezu ya. Ma eleghị anya, ị gaghị enwe obi ụtọ na ị ga-ejide onwe gị oge ụfọdụ iji chekwaa ego ọzọ ma nweta ụdị egbu egbu n'elu, dị ka ndokwa!
16. Ụkwụ akpụ ụkwụ
17. Ụkwụ egbu egbu
Inweta egbu egbu bụ ihe dị mkpa maka ịnọgidesi ike na ike. I kwesịrị igbu egbugbu maka ihe ọ bụla fọdụrụnụ ná ndụ gị, ọ gwụla ma ọ dị mkpa ka ị kwụọ ụgwọ maka iwepụ laser, n'ihi ya, ị ghaghị ịhụ na egbu egbu ị nwetara bụ ihe ị chọrọ maka oge ụfọdụ.
18. Mara mma ụkwụ
19. Ike egbu egbu
Ọ bụrụ na ị enwetatụbeghị egbugbu mgbe ahụ, ịhọrọ oke egwu, karịsịa na ihe kpatara na nhọrọ ahụ bụ nhọrọ nhọrọ abụọ ma ọ bụrụ na ị ga - ahọrọ ọnya na ebe ị ga - esi nweta ya.
20. Ogbugbu egbu egbu
21. Ụdị egbu egbu dị ịtụnanya
Mgbe ị na-eche ma ị ga-egbu egbu ma ọ bụ, ị ga-ahọrọ ebe ị ga - esi nweta ya na ahụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na ngalaba nchịkwa, ị nwere ike ịhọrọ iji egbu egbu na nso nke ị nwere ike ịchekwa.
22. Ụkwụ akpụ ụkwụ
Jide n'aka na ị na-arụ ọrụ gị ma chọpụta ma ha nwere ndokwa na tattoos. Òtù ndị dị ịrịba ama, dịka Disney, na ọ dị mkpa ịkọwapụta aha ọma ọ bụla ga-eme ka ị kpuchie ọnya ahụ ma mee ka ọ bụrụ na ị nwere egbu egbu n'ebe a na-ele anya.
23. Ụdị ụkwụ egbugbere ọnụ
24. Ụkwụ egbu egbu
Na ohere na ọrụ gị na-ekwu na ị nwere ike igbu egbu na ebe ọ bụla ị chọrọ, mgbe ahụ, nhọrọ ahụ bụ nke gị.
ụmụnne mgbumehndi imeweNtuba ntughariegbugbu maka ụmụ agbọghọỤdị ekpomkpaegbu egbu egbuokpueze okpuezedi na nwunyen'olu oluazụ azụEgwu ugona-egbu egbuegbugbu egbugbuaka akaenyi kacha mma enyiọnwa tattoosakara ntụpọima ima mmaegwu egwuụkwụ akaechiche egbugbuegbu egbu okpuaka mma akaGeometric Tattoosaka akarip tattooszodiac akara akaraegbu egbu ebighi ebiọdụm ọdụmUche obiegbu egbu mmirikoi ika tattooagbụrụ ebona-adọ aka mmamma tattoosarịlịka arịlịkaegbu egbuAnkle Tattoosngwusi pusiegbu egbu hennaudara okooko osisiakpị akpịegbu egbu maka ụmụ nwokeakwara obinnụnụndị na-egbuke egbukeenyí egbu egbuegbu egbu diamondegbu egbu osisi lotusndị mmụọ ozi